Mourinho Oo Si Dadban U Xaqiijiyay Inay Ka Quusteen EPL %
Mourinho Oo Si Dadban U Xaqiijiyay Inay Ka Quusteen EPL
Hogaamiyaha Manchester United ee Jose Mourinho ayaa wuxuu daboolka ka qaaday inay tahay wax aan macquul ahayn in Manchester City si gaar ah loo daba dhigto si ugu yaraan loogu dhawaado hogaanka Premier League ama looga dulqaado.
Hadalkaan ayuu Mourinho carabka ku dhuftay kadib markii ay xalayto uga soo badiyeen dhigooda Swansea City 2-0, halka Sky Blues ay iyadana 3-1 ay uga badiyeen Everton, taasoo keentay in horyaalka ay ku qabtaan hogaankiisa 84 dhibcood.
Kooxda kubada cagta Manchester United oo hada fadhisa kaalinta labaad ayaa waxay leedahay 68 dhibcood, 31 kulan oo ay ka dheeshay EPL-ka,taasoo ka dhigan inay ka dambeyso kooxda uu hogaamiyo Pep Guardiola 16 dhibcood.
“Horyaal kale, waan u dagaalami karnaa waa wax xoogaa,” ayuu Mourinho usheegay wariyaasha kadib ciyaartii Swansea City
“Xagaagii hore waxaan ku guuleysanay koobab, laakiin waxaan ku dhameysanay kaalinta labaad ee kala sareynta,” ayuu Mournho sii daba dhigay, kaasoo fasal ciyaareedkii hore, Red Devils uqaaday League Cup iyo Europa League.
“Waxaan dooneynaa inaan ku dhameysan sanadkaan kaalinta labaad iyo wax ka badan 10 dhibcood oo xagaagii hore ah, goolal badan, in goolal yar nalka dhaliyo, laakiin waxaa jira kooxo aysan macquul ahayn in la raaco.
“Waxaan mar walba nahay kuwa haysata xagaagan wax wanaagsan, waxaana wali aan haysanaa FA Cup oo aan qaadi karno, waxaana usoconaa inaan udagaalano joogitaankeena halkaas,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Mourinho.